Nahazo roa heny aho, fa ny "ahy hafa" dia Troll | Avy amin'ny Linux
Nahazo roa heny aho, fa ny "tenako hafa" dia Troll
Mety efa fantatry ny mpampiasa sasany, ny sasany nanontany ahy, ary hitako manokana fa misy hafa "Elav" amin'ny Internet noho ny sioka iray. Ny tiana holazaina dia hoe, misy olona misandoka ahy, mampiasa ny solon'anarako, ary na ny avatar-ko aza, hanafika Peevish en Tena Linux.
Natomboka tamin'ny ity hevitra ity izay nesorina araky ny fangatahako ary aiza ilay sandoka "Elav" tafintohina mivantana Peevish. Izaho manokana dia tsy naniry ny hijery akaiky an'io, fa efa lasa somary manelingelina ilay olana ary misy vokany be io.
Ary hoy aho tamin'ny Twitter, Tsy miraharaha firy ny voninahitro aho, satria iza no mahalala ahy mahalala fa tsy ho afaka hanafika olona amin'ny fomba tsy mendrika aho ary kely kokoa, raha nisy tsy nanao ahy, na nilaza na inona na inona. Tsy manahy koa aho fa ny lazan'ny Avy amin'ny Linux, noho ny zava-misy tsotra fa raha eto isika anio, mihoatra ny ho ahy na ho an'ny KZKG ^ Gaara, Izany dia noho ianao.
Ny voninahitra no azontsika fiaraha-monina inona no manodidina Avy amin'ny Linux, ary izay mety eritreretin'ny sasany momba ahy, na mpampiasa hafa eto, dia tsy hisy fiantraikany kely amin'ny bilaogy. Mampalahelo fa misy troll hatraiza hatraiza, ary ny fahasamihafan'ny eritreritra dia mitovy.
Ahoana raha tsy hitako fa marina, dia ny fampiasana ny mombamomba ny olon-kafa, noho ny tsy fananako ireo baolina hiseho sy hiatrika ny vokatry ny hetsika nataontsika.
Azoko antoka fa ilay olona naka tahaka ahy dia teto Avy amin'ny Linux ary efa namela ny heviny. Maniry aho ary hendry izy ary nametraka ireo hadalana rehetra nosoratany dia nampiasainy TOR na rafitra sasany hitazomana ny anaranao tsy hitonona anarana sy hitazonana ny adiresy IP anao miafina. Manantena aho fa.
Amin'ity lahatsoratra ity dia te-hanazava amin'ny fomba ofisialy aho, fa tsy izaho no milaza azy ho tenako. Tsy misy manohitra ahy izany Peevish na mpikambana hafa ao amin'ny Tena Linux, ary kely kokoa, noho ny tanjon'ny Avy amin'ny Linux dia ny "fanonganana" an'io toerana io izay nampiroborobo ny fampiasana ny Free Software hatrizay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » hafa » Nahazo roa heny aho, fa ny "tenako hafa" dia Troll
Ny ahy, tsy noeritreretiko mihitsy hoe hahatratra ity haavo ity ny haavon'ny fivezivezena, manoloana ny maha-izy azy na dia misy sary aza, mahavariana izay mety ho tratry ny saina tsy miasa ary tsy misy neurons.
Ampifalio i Elav ary aza manafana ny lohanao amin'ny adala.
Tadidiko fa rehefa nandalo ny dingana fivezivezena aho, manodidina ny 10 taona. Tamin'izany fotoana izany dia niaro ny Windows Vista aho tamin'ny vidiny rehetra, saingy tsy nanana na inona na inona aho. Nefa mihalehibe ianao ary tsy manam-potoana handehananao ao amin'ny trano fidiovana akory. Mitranga izany rehefa mandeha ny fotoana.
Saingy, tapahina aloha ny lahatsoratra, avy eo tsy mandeha ny fanehoan-kevitra ... eto ny mpamosavy xDD
Famosaviana, nanao ody (8)
Angamba misy infiltrator: NA COUPLE TO DESDELINUX
¬¬ Tsy te hahalala izay ataontsika eto amin'ny fireneko ho an'ireo izay manandrana manome Coups d'état ianao ... milaza aminao fotsiny fa afaka maka sary an-tsaina jiro ianao, boribory hazavana lehibe izay misambotra anao ary manjavona ianao , mandrakizay hahaha
Akaiky an'i Pluto ve ny firenenao? xD
avy aiza ianao? Tsy fantatro mihitsy xD
Nosy iray any Antilles .. miantsona amin'ny Hoalan'i Mexico .. Tsy holazaiko anao intsony haha
? Cuba? Haiti? xD
Kapiteny mazava tsara hamonjy azy: Kuba izy.
Kapiteny tsy mahalala fomba USA
Mitanisa an'i Michael Moore. Ohatra iray ity:
Tamin'ny 1962, araka ny voalazan'ny San Francisco Chronicle, ny sesitany Kuba, José Basulto, tamin'ny iraka notohanan'ny CIA, dia nanapoaka tafondro 20mm avy amin'ny sambo hafaingam-pandeha tao amin'ny Hotely, akaikin'ny Havana Bay, nanantena ny hamono an'i Fidel Castro. . Tsy nahatratra ny tanjona kendreny ilay projectile, ary i Basulto, rehefa nahita fa feno lasantsy latsaka ny sambony, nitodika nankany Florida. "Ny iray amin'ireo tanky solika anay, vita amin'ny plastika, dia nanomboka nihena", hoy ny fanazavan'i Basulto taty aoriana. 'Ny solika niraraka tamin'ny tokotanin-tsambo. Tsy hitanay izay hatao ".
Taona maro taty aoriana, nanangana “Hermanos Al Rescate” i Basulto, vondron'olona sesitany taona vitsivitsy lasa izay izay nanidina teo ambonin'i Kiobà, nibitsibitsika ny fiaramanidiny tamina tanàna, nandatsaka bokikely ary tamin'ny ankapobeny dia nanandrana nampitahotra ny governemanta kiobàna. Tamin'ny volana febroary 1996 dia toa nanjary tofoka tamin'ity fanorisorenana ity i Castro, ary taorian'ny zava-nitranga faha-25 tao anatin'ny herintaona nataon'ny "Brothers" nanitsakitsaka ny habakabaka kiobanina dia nandidy ny hitifirana ny fiaramanidiny roa izy.
Na dia nandika ny lalàn'i Etazonia aza ny "Brothers to the Rescue" tamin'ny alàlan'ny fanidinana azy teny amin'ny habakabaka kiobàna, dia niditra tany amin'ny penina sesitany indray ny fitondrana Clinton ary namoaka didim-pitsarana ho fanamafisana ny embargo an'i Kiobà. Ity fanakanana ity dia nitondra ny fahatezeran'izao tontolo izao tamintsika. Ny United Nations General Assembly dia nifidy 117-3 ho fanamelohana an'i Etazonia noho ny herisetra ara-toekarena nataony tamin'i Kiobà, toy ny tranga isaky ny latsa-bato momba io olana io hatramin'ny nametrahana ny embargo.
Ny herinandro taorian'ny nitifirana ireo fiaramanidina dia niezaka ny hanafika an'i Etazonia ireo babo, manantena ny hanao miaramila amin'ny karazana hetsika atao amin'i Castro. Nanambara izy ireo fa ny sabotsy manaraka dia hitondra sambo flotilla iray avy any Florida mankany amin'ny morontsirak'i Kiobà izy ireo hanohitra ny fianjeran'ireo fiaramanidina roa. Nanapa-kevitra i Clinton fa hanao fampisehoana hery lehibe indrindra hanohitra an'i Kiobà hatramin'ny krizy Missile, ary nalefa
a .. squadron'ny mpiady F-15,
b .. mpikapa ny Coast Guard iraika ambin'ny folo,
c .. sambo mpiambina balafomanga roa,
d .. sambo an-dranomasina,
e .. fiaramanidina roa C 130,
f .. andian'ny Choppers,
g .. AWACs,
h .. sy mpilalao afovoany 600 hanohana ny flotilla.
Ny hany zavatra hadinony nandefa azy dia ny fanafodin'ny hain-dranomasina, izay - tamin'ny farany - no hany zavatra nilain'ireo Kubaana Miami. 40 kilaometatra monja avy eo Key West, nanomboka nihasosotra ny Kiobàna tao anaty sambo, nandoa ary niangavy ny mpanamory fiaramanidina hamadika ireo lakana matanjaka ary hiverina any Miami. Miaraka amin'izao tontolo izao mijery, nandositra indray ireo kiobà niaraka tamin'ny rambony teo anelanelan'ny tongony. Rehefa tonga tao amin'ny seranan-tsambo izy ireo dia nanao valandresaka ho an'ny mpanao gazety hanazavana ny fisintonan'izy ireo.
Mbola somary nisahotaka ilay mpitondra teniny, ary hitanao ny mpanao gazety misaraka aminy, noho ny tahotra sao ho voasaron'ny "Linda Blair Special" izy ireo amin'ny fotoana rehetra ... "Nisy tafio-drivotra mahatsiravina niseho teny an-dranomasina," hoy ny mpitarika ny Tafatsoaka ny kiobà nefa lasa mavomavo haingana. "Ny onja dia mihoatra ny folo metatra ny haavony, ary tsy maintsy miverina isika na very sambo!" Teo am-pitenenana dia nanomboka nandefa sary an'habakabaka ny flotilla mankany Cuba ny manam-pahaizana momba ny famoronana sasany.
Namiratra ny masoandro, nilamina toy ny takelaka ny ranomasina, ary nitsoka moramora ny rivotra, raha sanatria. Nilaza ny mpitati-baovao any amin'ny ranomasina ambony fa rehefa lasa ny fakantsary CNN dia nanjary "marokoroko" ny rano. Eny, azo antoka, izany dia noho ny fihomehezan'i Fidel, izay nihomehy tamin'ny fihomehezana ...
«¬¬ Tsy te hahalala izay ataonay eto amin'ny fireneko ho an'ireo izay manandrana manome an'i Coups d'État ianao ... milaza aminao fotsiny fa afaka maka sary an-tsaina jiro ianao, boribory hazavana lehibe izay misambotra anao sy ianao manjavona, mandrakizay hahaha »
Hahaha, fametrahana inona! xD
hahaha, miala sasatra elav ... Fantatro fa mahasosotra izany ary manome fahatezerana nefa tsy dia miraharaha loatra, araka ny voalazanao, ireo izay mahalala anao (sy ireo izay mahalala anao toa ahy) dia mahalala fa tsy hanafika olona tsy ara-drariny ianao ka milamina.
Tsara ny fahalalana .. fa misy foana ny clueless mino an'io 🙁
Mpiray tanindrazana mahafinaritra anao ny taloha nihira ny "Nomenao poizina aho, ary poizina nalaiko, fa rehefa poizina aho, hitanareo, tsy nanapoizina ny tenako aho" ... mihirà ary aza manahy, misy karazan-kazo io na aiza na aiza.
Eny, vita ny simba. Mampalahelo fa misy ny olona toa izany, mbola ratsy kokoa aza, noho io fanehoan-kevitr'ilay clone Elav io dia efa nisy sary ratsy natsangana. Soa ihany fa nanazava ireo fisalasalana ity lahatsoratra ity, efa nilaza aho fa "tsy izy io."
Na dia tsy maintsy miaiky aza aho fa nihomehy namaky ny Elav tamin'ny fanehoan-kevitra. Ny klone Yoyo sy ny Pablo avy amin'ny Let's Use Linux ihany no tsy hita. Ahhh, ary KZKG ^ Gaara.
xDD Hitsahatra izao tontolo izao ..
Heveriko fa tsy dia be loatra ny fahasimbana vita hatrizay tao muylinux (pejy izay tsidihiko matetika miaraka amin'ity) dia misy troll maromaro saika amin'ny lohahevitra rehetra, koa aza manahy, heveriko fa tsy ratsy izany
Mety misy izany, fa ny sasany mino azy .. Saika nino izany aho rehefa nahita ny avatar-ko .. WTF?
marina fa azoko an-tsaina ny trauma 0.0, ny zavatra mitranga ... izao dia mila manao mpamosavy fotsiny isika ary mitady ny troll hehehe
Novakiako ny fanamarihany fanaovam-beloma an'i picajoso tamin'ity maraina ity (avy any Mexico) ary novakiako ny hevitry ny klone anao, ary avy hatrany dia nanatsoaka hevitra aho fa tsy mety ho anao izany, noho ny antony roa tsotra:
-Ny fomba fanoratana ny hevitra.
Na dia mety anao aza ny avatar sy ny anarana, mety tsy ny fomba fanoratana, izany no fahasamihafana lehibe.
Izaho manokana dia mihevitra aho fa manana fanoratana tsara ianao, ary mahalana no mampiasa teny maloto amin'ny publication (raha vao misy zavatra manelingelina anao).
Tsy mahagaga raha iray na roa volana lasa izay, tsy tadidiko tsara izany, namaky ny hevitrao momba ny fanafihanao an'i Picajoso aho, nahatonga ahy "hafahafa" avy taminao; fa tsy nandinika azy intsony aho, azoko antoka fa tsy ianao no izy.
Aza manahy anefa, izahay izay mamaky "FromLinux" dia mahalala fa tsy manoratra na manoratra amin'ny hadisoana tsipelina ianao, toy ny "troll" sasany izay be dia be ao amin'ny "Very Linux" ary indraindray mandeha etsy. Ny maha samy hafa azy dia eto, tsy misy milalao ny lalao adalany.
Misaotra .. Faly aho mahafantatra fa manana izany fiheverana ahy izany ianao .. [mibitsibitsika] na dia tsy te hahita ahy aza ianao rehefa tezitra aho, dia notsindrian'ny fanahiko izy ireo hamorona ny Hulk… xDDD
Hahaha, antenaiko fa tsy hitako ianao nivadika ho Hulk.
Amiko manokana dia heveriko fa ireo "troll" rehetra be dia be ao amin'ny pejin-tranonkala ireo, indrindra ireo an'ny GNU / Linux, dia mieritreritra aho fa tanora tsy manan-katao akory izy ireo, manelingelina ny hafa, malaina, tsy manana kolotsaina fanajana ary amin'ny hevitry ny hafa. Mino izy ireo fa ny heveriny, ampiasainy na dinihiny dia "haraton'ny planeta" araka ny lazaintsika any Mexico (tsy miteny an'izany aho satria mihevitra ny tanora ho toy izany, vao manondro ny tsy fahamatorany amin'ny tohan-kevitr'izy ireo).
Fiompiana tahaka ny antsika kokoa izy ireo, ampy ny mihodina amin'ny pejy hafa amin'ny teny Anglisy ary ny ankamaroan'ny fanehoan-kevitra dia feno fanajana, na amin'ny lohahevitra navoaka, na ireo izay maneho hevitra, ohatra; Ao amin'ny "OMG Ubuntu" dia tsy fahita firy ny famakiana izany karazana fandikan-dalàna izany sy ny fanilihana nataon'ilay mpanonta, na olon-kafa manonta ny heviny izay mamaritra kely ny fari-kolontsaintsika.
Ny hevitro manetriketrika fotsiny dia hoe mety mbola diso aho.
Miarahaba anao XD.
ary indrisy fa tsy izany ianao.
Marina izany, io trolley kely io dia efa tao Muylinux nandritra ny fotoana kelikely. Mazava ho azy fa fantatro foana fa izaho dia troll an'ireo izay be dia be amin'io pejy io, pejy iray izay tiako be dia be. Eny, ny troll-nao dia famantarana iray fa malaza kokoa eto amin'ity tontolon'ny GNU / Linux ity ianao.
Izany no nahatonga ahy hahatsiaro ny fotoanako tao amin'ny ClubSO; pejy iray izay nampidiriko tao dia nitovy tamin'ny mpampiasa tsotra ary avy eo nanasa ahy ho mpanelanelana ary avy eo mpitantana. Saingy raha tany aho dia nanomboka nahatsikaritra "zavatra hafahafa" vitsivitsy ary rehefa niresaka an'izany tamin'ny webmaster CrystalEye aho dia nanomboka nanakana ahy izy ary avy eo tsy hitako izay tetika nampiasainy, dia navoakany ny tenimiafiko avy tamin'ny mailako ary nanomboka nandefa mailaka avy amin'ny kaontiko tamin'ireo mpampiasa isan-karazany , namana sy fianakaviana manevateva azy ireo ary manao azy ireo amin'ny fomba tsy mendrika (hametraka izany amin'ny fomba mendrika) ary avy eo dia nosakanany ny kaontiko ary tsy fantatro izay zava-nitranga hafa, satria hatramin'ny 25 Janoary 2012 dia tsy niverina tany aho, tsy maintsy namorona kaonty vaovao an'ny mandefa mailaka ary avy amin'izy ireo dia miala tsiny amin'ireo nahazo mailaka avy amin'ny kaontiko izay tsy nalefako. Izany no mitranga; araka ny nolazain'ny raibeko taloha; "Noho ny fahatokisako loatra sy ny mahamety ahy." Nandray an-tanana ny fitarainako ny polisy ara-tsiansa Arzantina ary nahatsikaritra fa ny zava-drehetra dia vita avy any Mendoza, tanàna ipetrahan'ity olona ity ary nangataka ahy izy ireo hametraka fitoriana heloka bevava hisamborana azy, saingy tsy manana an'io tsirony valifaty io aho ary bebe kokoa amin'ny tanora iray ary zara raha velona izy amin'ny asa maotina ary mbola mandeha amin'ny facu, ka aleoko avelan'ny Universe hitantana azy. Efa naharesy ny dingana famaliana faty aho, tsara kokoa ny fiainana miaina amin'ny fifaliana ary (fitenenana iray hafa an'ny raibeko): "ny hazo mamoa ihany no itorahany vato azy."
Novakiako ireo fanehoan-kevitra "klôlika" ary mazava ho azy, mazava ho azy fa tsy ianao "Lehilahy veloma ..." hoy ny fanehoankevitra 83 raha toa ka tsy miteny toa izany ny firenena ipetrahanao. Mangataka IP aho, azo antoka fa olona avy any Mexico na Chicano izany
... dia hoy izy:
Ny veloma manito dia napetrako, ary raha mijery ny solon'anarana aho dia tsy anisan'ireo Elav klone. Raha ny marina dia nanontany an'i Elav tamin'ny lahatsoratra hafa aho raha izy izany, satria misalasala ihany koa aho. Raha te hahita ny clone Elavs ianao dia ao amin'ireo fanehoan-kevitra taloha, dia mankanesa any ambanin'ny pejy ianao ary ao no miteny hoe "fanehoan-kevitra taloha". Izao dia mipoitra avy amin'ny hevitra faha-44 izy ireo, fa ny iray kosa nofafany noho ny teny ratsy. Ilay elav izay mamaly ahy amin'ny hevitro dia miharihary fa tsy ilay tena izy.
Hehe, ary rahoviana, tsy Meksikana aho. Mba hisian'ny fisalasalana fotsiny dia aza arahana ny ip-ko.
Valiny ho ...
Lehilahy Elav, amin'ny farany, loza mitatao amin'ny varotra izy ireo, ary isika rehetra izay mamaky anao dia mahalala tsara ireo endrika ampiasanao hanoratra, noho izany dia mora ny mamantatra ilay mpisandoka. Ankehitriny araka ny tenanao matetika milaza; »Amin'ny farany ny zava-dehibe dia ny fitenin'izy ireo, na tsara na ratsy fa miteny izy» xD mijery ny lafiny mahafinaritra, <° Linux sy ny mpamorona azy dia nanjary fanta-daza fa izao dia manana ny troll-nao ao amin'ny MuyUbuntu xD
Tsy mahagaga ahy raha mahazo «sakaizan'Andriamanitra» bebe kokoa hatrany ianao ary mahita bebe kokoa ny voninahitra anafenanao ny tenanao, indrindra ireo naoty farany navoakanao.
Farafaharatsiny ho an'ny anjarako dia ianao no iray amin'ireo farany nanandrana nampandeha ahy, alohan'ny nieritreretako ny hitifitra ny lohako akory.
Saingy, samy manana ny fombany avy izy rehetra, farafaharatsiny tsy ahy izany, tiako ny milaza ireo zavatra izay eritreretiko mivantana amin'ny tarehy. 😉
Ho an'ny ambiny, toe-javatra mampalahelo izay ataon'izy ireo milaza ny olona adala.
Salama elav, efa namaly ny hafatra nalefanao tamiko aho androany tolakandro, any no hanazavako ny zava-drehetra. Na izany na tsy izany, hiezaka izahay hisoroka ireo zavatra ireo tsy ho tonga amin'ny ho avy 😉
@Rayonant, heveriko fa tsy dia nampihomehy loatra momba ilay zavatra troll i elav, fa izany no mitranga rehefa tsy manaja ny olona. Raha ny fanazavana, MuyLinux izahay fa tsy MuyUbuntu.
Tiako ny hijanonanao Metalbyte, manantena aho fa tsy hiala eo alohan'ny troll mora vidy.
Izaho aloha dia miala tsiny fa tsy mankasitraka ilay hevitra ianao, sangisangy kokoa (vazivazy) ny manandrana manala ilay loko mampientam-po, fantatro ny Blog ary fantatro fa misy atiny tsara. Mikasika ny elav dia mandeha amin'ny làlana iray ihany izy io.
oO Namaly ilay mailaka iray ihany ve ianao? Avelao aho hijery fa tsy nahita na inona na inona .. misaotra nanokana fotoana hanaovana an'io. 😉
Namaly ny adiresy nolazainao aho, heveriko fa ny adiresy Gmail anao manokana. Na inona na inona anananao ahy any 😉
@Rayonant, fantatro fa sangisangy izany, ny olana dia rehefa averimberina imbetsaka dia mitsahatra tsy misaotra, sa tsy izany? Indrindra amin'ity fidirana ity 😉
Mmm tonga lafatra. Misaotra anao.
Mampalahelo fa mitranga ity karazana toe-javatra ity, ary voahodinkodina ny tanjon'ny bilaogy roa lehibe, izay mikendry ny hampiroborobo ny tontolon'ny Linux. Ary tsara Elav, manantena isika fa tsy hiseho intsony ilay mpisandoka.
Niala tsiny indrindra aho nahita ny fomba namenoana ireo forum tamin'ny Spam, ary izao ity. Mampalahelo tokoa. Nefa aleo tsy avelantsika ho resin'ny olona izay mazava ho azy fa tsy nahita fianarana.
Ny tena manaitra ahy dia ny fisintomako an'i picajoso
Ny tena marina dia tsy mahagaga ahy izany. Na inona na inona antony (izy, raha fintinina, miampanga andraikitra be loatra sy faravodilanitra hafa), ny marina fa tato ho ato ny lahatsorany dia dika mitovy amin'ny vaovao MuyComputer hafa ihany, izay niteraka hazo sy hazo tamin'ny tanan'ny mpamaky. Tapitra ny famaranana ny tsingerina rehetra, ary ny mangidihidy dia tsy ho afa-miala amin'ny lalàna.
Ankoatry ny Troll, misy olon-dratsy hafa iray hafa ary izy ireo no mpitantana ny MuyLinux, avy amin'ny hafatra voalohany nataon'ity mpisandoka ity, tokony nifandray tamin'i Elav avy hatrany izy ireo ary nandray ny fepetra noraisin'izy ireo, fa araka ny nolazain'i Elav taminay dia ny mifanohitra amin'izay no mahalala bebe kokoa hoe iza i Elav noho izy tsy olon-tsy fantatra.
Efa nanao izay nilalaovanay izahay, ary raha ny marina dia ny elav ihany no nilaza izany teo am-baravarana. Nefa fantaro fa eo amin'ny tetezamita feno isika ary mbola ratsy kokoa aza amin'ny faran'ny herinandro. Omeo sisiny kely izahay hahatratrarana 😉
Izany ve ny fanafihana nataon'ny klona? Elav, tony tokoa, antitra, izay fantatray momba ny asanao, fantatray ny fomba hamalianao ary izany no mitranga, fa raha mahita ny ip-ny ianao dia mamely io fahantrana tsy misy indrafo io. Zavatra iray hafa nanova asa tato ho ato ary noho ny antony mahatonga ahy hahatakatra picky ary na dia mety manana hadisoana aza ny linux, dia mendri-piderana ny asa vita.
Mahamenatra fa misy foana ny olona toa izany na aiza na aiza. Topazo maso eo amin'ny lafiny mamirapiratra izy: ny fomba namoronany tahaka anao dia fomba iray hahafantarana anao. Tsy ho naka olona toa olona izy. Afaka mirehareha amin'ny tenanao ianao.
Mahamenatra an'i Picajoso ihany koa izany. Ankehitriny isika dia ambany noho ny fiarahamonina bilaogy Linux. Azo antoka fa mahomby amin'ny zavatra ataony izy.
Mampalahelo tokoa fa nanokana lahatsoratra ianao: /
Amin'ity tranga ity dia tsara izany, ny eLav dia efa nanao ny famoahana an'ity lahatsoratra ity taorian'ny fotoana niaretana ny hadalana tsy manam-piainana ary nanolo-tena hanala baraka azy ary nilaza mazava ny zava-mitranga; takatra tanteraka fa, efa leo amin'ny hadalana be loatra, dia nanapa-kevitra ny hanoratra lahatsoratra fitarainana, +1
Tsy nataoko ho azy v3on izany, nataoko ho an'ireo olona nanantona ahy nanontany momba ireo zava-nitranga ireo .. ary dia ataovy mazava tsara 😉
: S Inona no horonan-taratasy ratsy manantena aho fa ho voavaha tsy ho ela ny olana X_X
Ny mangina ihany anefa tsy misy fomba hahitana raha tsy apetrak'izy ireo eto satria tsy mitsidika ny Linux XD aho.
haha, misy foana ny troll manerana ny tamba-jotra, tsy tokony hiraharaha azy ireo fotsiny ianao.
Ary raha nolazaiko anao fa izaho dia io troll io, hahaha xd
Tsia, ny marina tsy hanome ny olona hajaiko sarotra velively raha tsy elav: sarcasm:
Raha nolazaiko anao fa raha ianao, dia efa manana Anonyme eo aminao ve ianao? xDDD
Miala tsiny aho amin'ny zava-nitranga Elav, tsy afaka namaky ny fanehoan-kevitra rehetra aho fa miharihary fa iza no mpisandoka amin'ny famakiana fotsiny ireo hevitra.
Manantena aho fa noraranareo izany ary omen'izy ireo tsara.
Hatramin'izao dia namaky ny fanehoan-kevitra aho (ary nandeha an-tsokosoko Oo) Azoko antoka fa tsy ianao, mazava kokoa noho izany, fa ny trosa's hdp, heveriko fa olona nakan'ity bilaogy ity izy ary tsy misy atao - .- Raha misy zavatra tsy zakako dia troll izany ary ratsy kokoa raha mody olon-kafa izy ireo.
animo elav ny vondrom-piarahamonina iray manontolo avy amin'ny linux dia manohana anao 😀
Ahoana ny fampifandraisana ireo rohy andriamby amin'ny Linux